Useshe i-wire - Hielscher Ultrasound Technology
Imiphumela yokusesha ye: Ifoni ("wire")
I-Hielscher Ultrasonics yenza amaprosesa asebenza ngokuphezulu e-ultrasonic ukulungiselela ukuhlanzeka okusebenzayo kwe-inline kwezintambo, izinduku, izintambo, ompompi, amashubhu nezinye izinto ezingapheli. I-Ultrasonic cavitation isusa ama-lubricants, insipho, i-stearates, i-grease, uthuli kanye nokunye ukungcola ngempumelelo ezintweni ezingapheli. Ngokusebenzisa amaza anamandla e-ultrasonic, izinhlelo zokuhlanza i-Hielscher's ultrasonic wire zingasebenza kusetshenziswa amanzi kuphela noma zihlanganiswe nama-ejenti wokuhlanza amnene. Ukuhlanza i-Ultrasonic wire akuyona kuphela esebenza kahle kakhulu, kodwa futhi kunobungani bemvelo. Iphothifoliyo ka-Hielscher yezinhlelo ezahlukahlukene zokuhlanza i-wire ngejubane lokufinyeleleka okuhlukile nemikhondo yezinyawo inikezela isethi efanelekile yokuhlanza yomugqa wakho wokufaka ucingo.
Found 70 hits. 12 are being shown:
Umshini wokuhlanza i-USCM700 Ultrasonic Inline
Umshini wokuhlanza izintambo we-ultrasonic i-USCM700 iyithuluzi elinamandla futhi elisebenza kahle ekuhlanzeni ngempumelelo izinto eziqhubekayo ezingapheli ezifana nezintambo, izinduku nemichilo. I-USCM700 ifaka isihlungi sebhande sokuzikhethela, esivumela ukugwenywa kwesihlungi…
Ama-Resins Agcwaliswe Kakhulu akhiqizwa nge-Power Ultrasound
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kuvumela ukufakwa okusebenzayo futhi okufana kokunye kwama-nano fillers kuma-resins. Abahlakazayo be-Ultrasonic bangakwazi ukuphatha kalula ukuhlushwa okuqinile okuphezulu ukuze kukhiqizwe izinhlaka ezigcwele kakhulu ngokusatshalaliswa kwezinhlayiyana ezifanayo. I-Sonication iyahambisana nakho konke…
Ultrasonic Wire Dweba Ukuhlanza
Ngokuhlanzwa kocingo lwe-ultrasonic, amagagasi aphezulu we-ultrasound abekwe phezulu ocingweni olujwayelekile lufa. Ukudlidlizela okukhulu kukhiqizwa ama-amplitudes aphezulu weprosesa ye-ultrasonic futhi ahlanganiswe ngqo ngocingo afele entweni esebenza ngensimbi (isib. Izintambo, izinduku,…
I-Ultrasonic Algae Extraction Yezakhamzimba Zokudla
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephakeme yokuphazamisa amaseli e-algae ngokuphumelelayo nangokushesha. I-Sonication ingakhipha inani eliphelele lamakhompiyutha e-bioactive, elenza ukuthi inqubo ye-ultrasonic isebenze kahle kakhulu. Ungawasusa Kanjani Amaprotheni, amaLipids namaPhenolics e-Algae…
I-UIP4000hdT – 4kW High Performance Ultrasonics
I-UIP4000hdT inikezela amandla afinyelela ku-4kW futhi iyimishini ethembekile yokukhiqiza noma ngaphansi kwezimo ezifuna kakhulu. Yakhelwe izinqubo zezimboni ngesidingo esiphakeme samandla namavolumu amakhulu. I-UIP4000hdT ingamandla futhi inamandla…
I-Ultrasonically Assisted Drawing of Izintambo, Amapayipi Namaphrofayela (UAD)
I-Hielscher Ultrasonics yenza isibambi somshini wokufa oshukumisayo osebenza nge-standard esebenza nge-wire efinyelela ku-42mm ububanzi. Ukuyaluza kwe-ultrasonic kunciphisa ukungezwani komugqa okudingekayo ukunciphisa ubukhulu. Lokhu kungasetshenziswa…
Ama-nanoparticles ahlakazeka ngokungakhethi anjenge-isiliva noma i-graphene enobungako bezinhlayiya obuhambisana kahle abalulekile ekukhiqizeni ama-inks aqondisayo kakhulu. Abasabalalisi be-ultrasonic abanamandla bavumela ukuhlanganisa, ukusabalalisa ngokweqile nokusabalalisa izinsimbi (isib. I-Ag), i-carbon-based (isib. CNTs, graphene) nanoparticles njenge…
I-Ultrasonically Assisted Drawing-Peeling ye-Wire Rods (UADP)
Ukudonswa kwezintambo zensimbi kuthuthukisa ikhwalithi ephezulu kakhulu ngokuxhuma kwezinto ezivela kusendlalelo yangaphandle yento. Kuyindlela eyaziwa kabanzi ngokujikeleza i-rotary-peeling, sandb ongapheli noma ukugaya. I-Ultrasonically isizeke ukudweba isebenzisa ukudlidliza okuphezulu…
I-UP400St i-Ultrasonicator enamandla
Nge-UP400St (400W, 24kHz), i-serial yamadivayisi we-Hielscher edijithali enwetshiwe yi-400 Watts ultrasonicator enamandla. I-UP400St entsha ingumlandeli we-UP400S - enye yezinhlelo ezaziwa kakhulu ngabakwaHielscher. I-Ultra yayo ephezulu…
Ultrasonic Wire Cleaning Test Setha
Izinhlelo zokuhlanza ze-Ultrasonic zisebenza kahle kakhulu ekuhlanzeni okuphakathi kwezinto ezingapheli ezinjengezintambo, izintambo, izinduku kanye namaphrofayili aqhubekayo. Ukuhlola imiphumela yokuhlanzwa kwe-ultrasonic ezintweni zakho ezithile nokungcola, iHielscher inikezela ngocingo olusetshenziswayo lwe-mobile…
Ukuthuthukiswa ngokwezifiso ze-Ultrasonic Process Solutions
I-Hielscher Ultrasonics ineqembu elinolwazi kakhulu le-R & D labaqambi bezobuchwepheshe nonjiniyela, okuvumela ukunikela ngentuthuko nokwenziwa ngezifiso kwezinqubo nezinqubo ze-ultrasound ezinamandla amakhulu. Izinsizakalo zethu zentuthuko zifaka phakathi izinsizakalo ezilandelayo:…